ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Joint Peace Fund ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့် ဆွေးနွေး - Yangon Nation News
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Joint Peace Fund ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့် ဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Joint Peace Fund (ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့)ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား Virtual Meeting ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ – ၁၄
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Joint Peace Fund (ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့)၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Tim Enderlin ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား Virtual Meeting ဖြင့်လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်လင်းဒွေးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Daniel Patrick Bredon Chugg တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့သို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် Joint Peace Fund (ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့)မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်း စဉ်များ၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် JPF (ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့)၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လိုအပ်သည်များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့်အခြေအနေများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်ကလိုလားသည့် အခြေအနေများ၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲခြင်းအားဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ထိုဒေသ၌ လိုအပ်သည်များကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် တပ်မတော်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်မှစ၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထိ နှစ်နှစ်ကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပေးခဲ့သည့်အခြေအနေများနှင့် ထိုသို့ ရပ်စဲပေးထားသည့် ကာလအတွင်း NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းမရှိသေးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများကို တိုးတက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများ၊ ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲသည် အရေးကြီးသည့် မှတ်ကျောက်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ နယ်မြေအချို့တို့၌ ဥပဒေနှင့် အကြုံးဝင်သည့်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်ပြုလုပ် နိုင်ရေးနှင့် ယင်းဒေသများရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး မဆုံးရှုံးစေရန် လိုအပ်သည့်အခြေအနေများ၊
ထာ၀ရငြိမ်းချမ်းရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူညီသည့် သမိုင်းကြောင်းများ၊ မတူကွဲပြားသည့်အတွေးအမြင်များ၊ သဘောထားများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများ၊
တပ်မတော်အနေဖြင့် နေရပ်ရှောင်ပြည်သူများ ကို မိမိဒေသတွင်ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ရေးအတွက် နယ်မြေ လုံခြုံရေး၊ မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းတို့၏ ကျေးရွာဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းများကိုပါ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်စခန်း (IDP) စခန်းများတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည့် ဒေသခံများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ နေရပ်အသီးသီးသို့ ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်လျက်ရှိပြီး တပ်မတော်မှ မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လိုအပ်သည့်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များကို လက်တွေ့ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများနှင့် တိုးတက်မှုအခြေအနေများ။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအောင်မြင်စေရေးအတွက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ယုံကြည် မှုရှိစွာဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ်တွင်သစ္စာစောင့်သိရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး တပ်မတော်အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို ရှောင်ရှားလျက် ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့် နိုင်ငံရေး လမ်း ကြောင်းကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရမည့်အခြေအနေများနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲ သည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုနှင့် ထာ၀ရငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Climate Ambition Summit ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ ဗီဒီယိုဖြင့် မိန့်ခွန်းပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေမှာ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ အမြန်ဆုံး ကျင်းပနိုင်တဲ့ အခြေအနေရောက်အောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကြဖို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတ တိုက်တွန်း